पोले पनि घामै राम्रो « नेपाली मुटु
« उज्यालो तिर
काठमाण्डौ बसुञ्जेल काठमाण्डौलाई कति गाली गरिन्छ । छि ! फोहोर पानी, छि ! ढलको फोहोर, छि ! अस्तव्यस्त घरहरु, धुलो धुँवा ………….. आदि आदि । हुन पनि काठमाण्डौको विशेषता नै भनौं, यो सबै सहेर पनि काठमाण्डौं हामीलाई छत दिन्छ । भबिष्य दिन्छ । अवसर दिन्छ । यो काठमाण्डौको महानता हामी काठमाण्डौ बसुञ्जेल यादै गर्दैनौं तर जब हामी काठमाण्डौं छाडेर बाहिरिन्छौं, काठमाण्डौको निकै अभाव खट्किन्छ । हाम्रो बिडम्बना यो छ कि काठमाण्डौंमा जे पाईन्छ, नेपालको धेरै भुभागमा त्यो कोरा सपना जस्तो लाग्छ । भर्खरै मैले यो महशुस गरे ।
बितेका केहि दिन म काठमाण्डौं छोडेर यस्कै नजिकको जिल्ला धादिङमा पुगें तर नजिकै भएर पनि त्यो जिल्ला र यो काठमाण्डौंको तुलना आकाश र पातालको जस्तो हुने रहेछ । हामी विकाशका नाममा प्रविधिसँग यसरी जोडिइसकेछौ कि हामी यो प्रविधिको दास बनेका रहेछौ । यसैले काठमाण्डौबाट बाहिरिने बित्तिकै हामी सबै भन्दा बढि यहाँको यही प्रविधिलाई सम्झिदा रहेछौ । यसैले त पोले पनि घामै राम्रो भने जस्तो रहेछ हाम्रो लागि काठमाण्डौं ।
तपाईले कहिले तुलना गर्नु भएको छ काठमाण्डौं र नेपालका अरु ठाउँलाई ? के फरक पाउँनु भयो त तपाईले ?
This entry was posted on August 23, 2010 at 12:48 pm	and is filed under मेरो भन्नु. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “पोले पनि घामै राम्रो”
धेरै दिन हराउँनु भयो नि । जे होस् आउँने बित्तिकै तातो बहस सुरु गर्न लाग्नु भएकोमा धन्यवाद।
नेपालको राजधानी हो काठमाण्डौ । त्यसैले यो जत्तिको अरु त हुने भएनन् नै तर यसको एक छेउ पनि कुनै ठाउँ छैनन् यो चै दुखको कुरा हो ।
मैले पनि निकै गाउँहरु देखेको छु जसले गर्दा म तिनीहरुको दुख कल्पना गर्न सक्छु । तर प्रविधि बाहेकको जीवन प्यारो नै हुन्छ ।
विनोद गुरुङ्ग said
मेरो घर पनि धादिङ नै हो । म अहिले दुबइ मा छु । मेरो जिल्लाको बारेमा लेख्नु भएकोमा धन्यवाद ।
saran tamang said
i always think, when my vilage grow asatown ….there are so many people waiting to baapart of development and technology…..hope it will be true.
मेरो घर बाग्लुङ हो । मेरो गाउँमा अझै पनि मानिसहरुले कम्प्युटर देखेको छैनन् ।